Taageerayaasha xulka Brazil oo dalbaday iney quarter final-ka la ciyaaraan Argentina hadii ay soo baxaan. – Gool FM
(Brazil) 23 June 2019. Martigaliyayaasha tartanka Copa America (Brazil) ayaa u gudbay wareega quarter final-ka tartanka kadib guul ay ka heleen xulka Peru, waxaana jirta suuragalnimo ay ku wajahi karaan Argentina wareega xiga hadiiba xulka rajada yar heysta uu soo gudbo.
Qaar ka mid ah jamaahiirta qaranka Brazil ayaa durba dalbanaya iney la ciyaaraan quarter final-ka Argentina hadii ay soo baxaan, sidoo kalana wax cabsi ah maba ka qabaan Lionel Messi kaas oo aan wax badan sameynin labadii kulan ay qarankiisa ciyaareen tartanka ilaa iyo hadda.
Marca ayaa la dhex qaaday makaroofanka jamaahiirta Brazil waxeyna weydiiyeen hadii ay cabsi ka qabaan qaranka Argentina, dhamaan waxey ku jawaabeen “Maya”
“Waxaan doorbidi lahaa Argentina, wey fududaan laheed” ayuu yiri taageere.
“Messi kuma jiro waqti wanaagsan waqti xaadirkaan” ayuu yiri taageere kale.
Waa maxay sababta ay Barcelona isaga hartay loolanka ay ugu jirtay saxiixa da'yarka Ajax Matthijs De Ligt?